Ugaaska beesha Sade Daarood, Ugaas Cumar Ugaas Xirsi oo Nairobi ku Geeriyoodey | Gedoonline
Ugaaska beesha Sade Daarood, Ugaas Cumar Ugaas Xirsi oo Nairobi ku Geeriyoodey	Added by khabar on June 9, 2011.Saved under Arrimaha Bulshada, Latest News	Nairobi: (GMN) Allaha u raxmadee Ugaas Cumar Ugaas Xirsi Ugaas Maxamed Ugaas Guuleed ayaa mudaa saacad ka hor ah ku geeriyoodey Gudaha Mgaalada Nairobi Kenya ka dib markii uu dhawaan la soo darsey xanuun ay dhaqaatiirtu ku tilmaameen Sokor.
in mudo ahba waxa uu ku xanuunsanaa ugaasku Gudaha Gobalka Gedo ilaa dhow goor oo loo keeney Samata bixinta dhinaca caafimaadka Xarumaha Wadamada Dariska ah sida Addis iyo Nairobi ayaa lagu guul dareystey daawweyntiisa ugaaska .
Ugaaska Beesha Sade Daarood Ugaas Cumar Ugaas Xirsi mudadii hana-qaadkisa ilaa iyo haatan waxa uu ku howlanaa arimaha Dhaqanka iyo hogaanka sare ee beesha sade Daarood gaar ahaan Gobalada Gedo iyo Jubbada Hoose waxaa uu sidoo kale ugaasku habab ay wakiillo matalayaan ku samo talin jirey wadamada ay beeshu ku firidhey ee qurbaha halka uu talo wadaag la lahaa beesha Sade Daarood dhinaca Bari.
Ugaasku Allaha u raxmadee waxaa la Filaayaa in Meydkiisa Aas loogu Qaado Degmada Garbahaareey ee Xarunta Gobalka Gedo halkaasi oo uu Dhalasho iyo masuuliyadba ka soo jeedo Xili arinkanina waxa uu dhacayaa guud ahaan Gobalka ay hareeyeen Dagaallo u dheexeeya Dowlada FKG Soomalaiya iyo XArakada Alshabaab.
Dhamaan Bahda Gedoonline waxay tacsi u dirayaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan Beesha Sade Daarood oo ay leyihiin Samir iyo Imaan Ugaaskana janadii allaha geeyo Aamiin Aamiin Aamiin.
Hay’ada Marcey R&D oo qalabeeysay xaafiiska Ugaaska Sade Bari.
Ugaas Ciise Ugaas Cabdulle Oo U Hambalyeeyay Raysul Wasaare Farmaajo.
Doorashadii beesha Sade ee London oo la mucaaraday.
Beesha Sade Oo Cambaareysay xariga Masuuliyiinta maamulka Bartamaha Soomaaliya.
Talo soo jeedin Beesha Sade.